3 Mazano Ekubudirira Kunyorera | Martech Zone
3 Kiyi dzeKunyora Kunyorera
Chitatu, Kurume 23, 2011 China, Gunyana 19, 2013
Rakanaka kopi chinhu chinonakidza. Izvo zvakaoma kusimba kuumba asi zviri nyore kugaya. Kunyora kwakanaka kuri nyore, kutaura, kunzwisisika uye nyore kuverenga. Iyo inofanirwa kutora musimboti uye mweya wechigadzirwa, sevhisi kana sangano, uku uchibatana zvakananga nemuverengi.
Basa remunyori rakaoma. Kutanga, iwe unofanirwa kuputsa izvo zvauri kunyora nezvazvo kusvika padanho repamoyo. Kuteedzera haisi iyo nzvimbo yekuratidza mangani makuru mazwi iwe aunoziva. Izvo ndezve kusvika kune iyo poindi uye kuwedzera kukosha. Asi hazvisi zvechigadzirwa chete.
Kuziva mutengi inhanho yekutanga kunyorera inoshanda kopi.
Mutsara wekupedzisira wakakosha kwazvo ndichaudzokorora. Kuziva mutengi inhanho yekutanga kunyorera inoshanda kopi.
Kunyangwe iwe urikunyora kushambadzira kopi, kambani tsamba, kana imwe-tambo yekufona kuti chiitwe, iro basa remunyori ndeyekupinda mukati memusoro wemuverengi. Ndeipi nguva yavo yekutarisa? Chii chavari kutarisira? Chigadzirwa chichaunza sei kukosha kwavari? Nei vachifanira kuenda neimwe mhando pamusoro peimwe?
Kuziva vateereri vateereri kuchakubatsira iwe kunzwisisa kuti vanozoshandisa sei iyo kopi. Ndedzipi mhando dzezvinotarisirwa kana zvakaitika zvekare zvavanazvo nekambani kana chigadzirwa chako kukanda? Ndeapi maitiro ekuita kana mhinduro yauri kuedza kukumbira kwavari?
Aya anongova mashoma emibvunzo yakanaka vanyori vanonyora vanobvunza vasati vagadzira huni. Paunowedzera kuziva iwe nezve chako chakanangwa muverengi, zviri nyore zviri kukwidza kune yavo yepazasi mutsara. Nzvimbo yakasimba yakagadzirirwa kuti muverengi azive maitiro auri kuita kuti hupenyu hwavo huve nyore.
Kupinda mundangariro yemuverengi wako akakodzera kunokubatsira kuti unzwisise mashandisiro avachaita chigadzirwa chauri kuyedza kutengesa. Nhanho yedendere inogadziridza iyo pani kuti iwane zvavanoda chaizvo. Kune nzira dzakawanda dzekukanda chigadzirwa chimwe chete, asi vanyori vakanaka vanowana nzira inoshanda zvakanyanya.
Heino muenzaniso: Ini ndinogona kungofungidzira ina kana shanu mhando dzevatengi vanofarira kutenga nyowani lap lap, asi ivo vese vanoenderana nezvechigadzirwa zvakasiyana.
Iyo tech geek ingangoda kuziva iwo mafekitori eprosesa, mangani madoko eUS ane, yakawanda sei data iyo yaanogona kubata nemazvo uye rudzii rwe software yainotsigira.
Iyo gamer inofarira internet kumhanyisa, mhando yevhidhiyo, kadhi rezwi, ndeapi mitambo aripo uye kana achigona kubata mutungamiriri.
Iyo bhizinesi pro inogona kunge iri kutsvaga ye-wi-fi yekubatanidza, nyore kushandisa, gwaro kuenderana uye tech tsigiro.
Iwo audiophile anotora akawanda enziyo panguva imwechete uye anoda kugona kutamba raibhurari yake inogara ichikura yemumhanzi kuburikidza neiyo stereo system.
Nekuti isu takatarisira tarisiro yevateereri uye nezvavanoda, tinogona kuratidza chigadzirwa nenzira yakanakisa yekuzadzisa izvo zvido.
Craft iyo Pitch Zvakarongeka
Mazuva ano yakawanda yakaipa kopi inotarisana chete nekushandisa mazwi akakosha. Mitemo yeSEO inzvimbo yakanaka yekutanga, asi munyori akanaka anokanda mazwi akakosha zvakasununguka, asingamanikidze munzvimbo dzavasiri ivo. Vanyori vakaipa vanongo vamanikidza mukati, vachiita kuti mazwi akakosha aonekwe senge mutserendende pamariro.
Mune mawonero angu, akanakisa kunyora haana kunzwa sekutengesa zvakaoma. Vazhinji vatengi havadi kurohwa pamusoro pemusoro nenamo. Ivo vanoenderana nezvigadzirwa zvinoenderana nezvavanoda uye kugona kwavo. Ndosaka zvakakosha kuita gumbo kana zvasvika pakutsvagisa vateereri uye chigadzirwa.
Unofungei? Chii chaunotarisa mukunyora kunoshanda? Siya iwe pfungwa mune zvakataurwa pazasi.